လေ့လာမှု: လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
comments: ဤစာတမ်းအတွက်4ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်ထုတ်ပေး) လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများ (လိင်စိတ်နည်းခြင်း (လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ fetishes၊ anorgasmia)) နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းပေးပို့သူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှရှောင်ကြဉ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈ လကြာပြီးနောက်ယောက်ျားသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ အောင်မြင်မှုရှိကြောင်း၊
J ကိုလိင် Med ။ 2014 Jul;11(7):1798-806. doi: 10.1111/jsm.12501.
Bronner G1, ဗင်္ဇိအုန်တောင်ပေါ်က IZ.
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘဝတလျှောက်လုံးအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူတို့တွင်တစ်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဉ်အလာတားမြစ်ထားပါသည်များနှင့်အကျင့်ပျက်နှင့်အတော်ကြာဘာသာတရားအားဖြင့်အပွစျရှိအဖြစ်တရားသဖြင့်စီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမရှိတော့အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုအမူအဖြစ်ကိုရိပ်မိပေမဲ့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူလူနာများ၏ရောဂါရှာဖွေစုံစမ်းရေးအတွက်ချန်လှပ်ထားသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းဆည်းပူးနေ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် masturbatory အလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအပါအဝင်၏အရေးပါမှုကိုမှ Clinician ၏အသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်နဲ့ဆက်စပ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (SD) ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်လက်တွေ့ကျသောအဆိုပြုဖို့ရှိပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများရှာဖွေရေးမှာနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် Clinician များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
လိင်ကုထုံးကိုလျှောက်ထားသောလူငယ်ယောက်ျားလေးများမှထူးခြားသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလေ့အကျင့်များပါ ၀ င်သည့်ရောဂါလေးမျိုးကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုကိုဖော်ပြထားသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းယူခြင်းတွင်တိကျသောမေးခွန်းများပါ ၀ င်သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူနာတစ် ဦး ချင်းစီ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့ကျင့်မှုကိုအသေးစိတ်နားလည်ခြင်းနှင့်သူ၏ SD တွင်ဖော်ပြခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် masturbatory အလေ့အထများဖော်ထုတ်နှင့်ပြောင်းလဲသက်ရောက်မှု။
အဆိုပါလူလေးယောက် SD ကအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်အဆင်မပြေ masturbatory အလေ့အကျင့်, ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ masturbatory အလေ့အကျင့်၏နားမလည်သူတို့၏လိင်ပိုင်း function ကို၏တိုးတက်မှုမှအထူးလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာလေးခုအမှုပေါင်း masturbatory အလေ့အထများ၏အသေးစိတ်မေးမြန်းအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏စေ့စေ့စပ်စပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သောကုသမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့ masturbatory အပြုအမူအပေါ်တိကျသောမေးခွန်းများကိုအဖြစ်သူတို့အားပြဿနာများဖြေရှင်းရန်သမားနှင့်လိင်ကုသမှုအတွက်တစ်အဖြေရှာတဲ့နှင့်ကုထုံး flowchart တင်ပြသည်။
Erectile အလုပ်မဖြစ်; Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Disorder; တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ; နှောင့်နှေးသုက်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း ယူ. , ပုံမှန်မဟုတ်သော Masturbatory အလေ့အကျင့်
ဖြစ်ရပ်မှန် 1: Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Disorder
သူက "သူ၏အသက်တာ၏မေတ္တာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး" နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူမ၏ရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ပေမယ့်သူကသူမ၏နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်မလိုသောဆန္ဒရှိခဲ့သောတိုင်ကြားမှုနှင့်အတူလိင်ကုထုံးများအတွက်တင်ဆက်တစ်ဦးက 35 နှစ်အရွယ်တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာသောသူသည်။ သူမရှိသလောက်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအစပျိုးနှင့်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Initiative ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်စိတ်ပျက်ခဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းချင်တယ်။ ထိုလူကိုသူသူမ၏ placate ဖို့ဆင်ခြေတီထွင်ခဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်မိမိမိုးသည်းထန်စွာပမာဏအပြစ်တင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကနေ့စဉ်နံနက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါအလိုအလျောက်စိုက်ထူရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမဆိုတ္ထုများအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မဆိုဆေးဝါးများ အသုံးပြု. ငြင်းပယ်ခြင်း, (ဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းအပါအဝင်) သည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစာမေးပွဲပုံမှန်ရှိကြ၏။ တစ်ဦးကစိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမှသူ၏စိတ်ပျက်ထက်အခြားစိတ်မမှန်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ထွက်အုပ်ချုပ် 20 ကျော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဆက်ဆံရေး၏ရှိသမျှတို့, အတိုးများနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဆုံးရှုံးမှုသို့လျင်မြန်စွာကျွံသွားမည်, ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလားတူပုံစံနောက်တော်သို့လိုက် စိတ်ပျက်နှင့်ဆက်ဆံရေးများရပ်စဲ။ masturbatory အလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါသူကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းကြည့်နေစဉ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်လျှင်မြန်စွာ masturbating ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါညစ်ညမ်းမူလကအဓိကအား zoophilia, ကျွန်ခံ, လွှမ်းမိုးမှုကို, sadism နှင့် masochism ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကနောက်ဆုံးမှာသည်ဤပစ္စည်းများမှ habituated နှင့်လိင်လိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်အပါအဝင်ပိုပြီးအမာခံညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများ, လိုအပ်တယ်။ သူကအကြမ်းမဖက်လိင်အပြုအမူများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပေါ်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့အမြိုးသမီးနှင့်အတူလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားမိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူတို့မြင်ကွင်းများမြင်။ သူတဖြည်းဖြည်းမိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အ fantasize ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်သူ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေလျော့သွားသည်။
အတိတ်ကာလများတွင်လူနာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် paraphilia ရောဂါနိုင်ပေမယ့်သူကုသမှုများအတွက်ရောက်သောအခါသူ hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါ (HSDD) နဲ့ပေးအပ်သည်။
လိင်ကုထုံးနှင့်အတူအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့် တွဲဖက်. မှာတော့လူနာဗီဒီယိုများ, သတင်းစာတွေ, စာအုပ်တွေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှမဆိုထိတွေ့မှု, ရှောင်ရှားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဤအကန့်သတ်နိုင်ဖို့လိုက်နာမှု၏6ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်သူတိုးမြှင့်အလိုဆန္ဒ၏အရိပ်လက္ခဏာသတိပြုမိသည်။ ဒါကသာမန်လိင်ကွဲစိတ်ကူးယဉ်သုံးပြီးနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြော့လှုပ်ရှားမှုများကိုကျင့်သုံးနေချိန်တွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ relearning ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ကုထုံးအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ သူကအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့မဆိုကြိုးပမ်းမှုမရှိဘဲ, သူ့ arousal စဉ်အတွင်းပျြောမှေ့စအာရုံကိုအာရုံစိုက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
8 လအတွင်းပြီးနောက်လူနာအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူမိန်းမနှင့်သူ၏ဆကျဆံရေးသက်တမ်းတိုး, သူတို့တဖြည်းဖြည်းကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားနိုင်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှ ၆ ပတ်တာကိုရှောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈ လကြာပြီးနောက်ယောက်ျားသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ အောင်မြင်မှုရှိကြောင်း၊
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမဆုံးယောက်ျားဖြစ်သူနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံသဏ္withာန်ရှိသောကျန်းမာသောလူငယ်တစ်ယောက်အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (သူ၏လိင်တံနှင့်အညစ်အကြေးသည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မတူဘဲကောင်းမွန်သည်။ ) မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုသမှုသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနှိုးဆွ။ သူ၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်မည်သို့“ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်” အတုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ reboot အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ reboot နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါသည်ကိုယ်တွေ့ကြုံမှမြင်သောအရာကိုနှင့်အတူ aligns တစ်ဦးတော်တော်လေးပုံမှန်အချိန်ဇယား၌တည်၏။ ငါအပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြန်လည်9လအတွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
masturbatory အလေ့အထများ၏အသေးစိတ်မေးမြန်းစေ့စေ့စပ်စပ်အကဲဖြတ်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်နှင့် အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏လုံလောက်သောကုသမှု.
မဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားတွေငယ်ရွယ်မြင်သောသူဆရာဝန်များ, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်အနိမ့် ED / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စောဒကအတွက်လာဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုအကြောင်းမေးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လိင်တံ porn နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ porn စောင့်ကြည့်ပေမယ့်မမြင့်မားဆန္ဒရှိပါက porn-သွေးဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအထောက်အထား Hacking ကို။ သူတို့ကအလွယ်တကူ masturbate နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့လူတို့သညျကိုမေး (တစ်ခုစိုက်ထူရ) နှင့်အော်ဂဇင်နိုင်ရှိရာဤသည်ကား, မပါဘဲ စောင့်ကြည့်သို့မဟုတ် porn စဉ်းစား။
မျဉ်းသားထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု: သူတို့ကတစ်ဦး reboot ကုသမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်အကြံပြုကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအဘို့အ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထွက်ဖြတ်တောက်ဒီလိင် drive ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို Mans တိုးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာ၌ရှိသကဲ့သို့ယခုပြုလုပ်ကူညီပေးသည်ပြန်လည်သုံးသပ်သက်သေအထောက်အထားစေ့စေ့ကြည့်ရှုသည်။ ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများကလူသိရှင်ကြား porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသအကြောင်းကိုအခိုင်အမာအရာကိုနှင့်အတူ aligns ။
အချို့သောလိုလားသူများက“ စွဲလမ်းမှုပုံစံသည်ဆေးကုသမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိပါ” ဟုဆိုလိမ့်မည် ကောင်းပြီ၊ Reboot Nation နှင့် YBOP တို့သည်“ စွဲလမ်းမှုပုံစံ” ကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအကြံပြုကြပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ စွဲသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်း (အာရုံစူးစိုက်မှု) အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု၊ ထောင်နှင့်ချီသောကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်များနှင့်အတူ“ စွဲ / အာရုံကြောပလပ်ခြင်း / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခြင်း” မော်ဒယ်သည်ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူများကိုကုသရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
ရယ်စရာကောင်းတာကဒီလူတွေထဲကတချို့ဟာ rebooting လုပ်တာဟာ“ အန္တရာယ်ရှိတယ်” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဟားဟား။ ဟုတ်တယ်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိ porn မပါဘဲသွားဖို့အကြံပေးတာကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ဘူး။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ဒီအာရုံစိုက်ပါ။ သူဟာသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်ခင်စွဲလမ်းခဲ့ပြီးသူမရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအလိုရှိခဲ့သော်လည်းဘာမှမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဤပြproblemနာသည်ဆွဲဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဦး နှောက်ဝါယာကြိုး / သင်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ rebooters တော်တော်များများကသူတို့ဟာသူတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူတူပဲ၊ သူတို့ဟာ porn မှာကြည့်တာကိုကြည့်ရတာပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတာတွေ့ပေမယ့်ဘာမှမခံစားရဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။
သူမဆိုတ္ထုများအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မဆိုဆေးဝါးများ အသုံးပြု. ငြင်းပယ်ခြင်း, (ဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းအပါအဝင်) သည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစာမေးပွဲပုံမှန်ရှိကြ၏။
ED နှင့်အတူလူငယ်များအတွက်ဘုံရှင်းလင်းချက်အချို့မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ အော်ဂဲနစ် (ဟော်မုန်း) ပြlikeနာများဖြစ်သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဤကောင်လေးအဘို့အအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူသည်ကျန်းမာနေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသုံးခဲ့ပါ။
ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေ ED များအတွက်နောက်ထပ်ဘုံရှင်းပြချက်စိုးရိမ်စိတ် / စိတ်ဓါတ်များမမှန်မှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလည်းထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်တဖန်သူသည်မဖြောင့်သည်သူ၏အဖော်နှင့်အတူကျန်းမာ, နှင့်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအပြည့်အဝ functional ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အတိတ်ကာလများတွင်လူနာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် paraphilia ရောဂါနိုင်, သူကုသမှုများအတွက်ရောက်လာသောအခါ, ဒါပေမယ့်သူ hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါနှင့်အတူတင်ပြ
ဤသူ၌သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက် LOW-libido ရှိသော်လည်း၊ Naysayers က "မလိုမုန်းတီးသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုမြင့်မားသောဆန္ဒရှိပြီး၊ ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကောင်အတွက်အမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ တကယ်တော့ဒါဟာ rebooters တော်တော်များများအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မခတ်နိုင်၊ သို့မဟုတ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မမောင်းနှင်နိုင်ပါက၊ ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်သည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံ“ Flatline” သို့သွားပြီးရက်သတ္တပတ်များ / လအနည်းငယ်မျှလိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုမြင့်မားသောပြidoနာမဟုတ်ပါ။
porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမြင့်မားသောမောင်းနှင်အားမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းစေသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သည်။
သူက reboot လုပ်ဖို့ကြားပြောလေ၏။ တစ်ဦးက reboot သင့်ဦးနှောက် sensitivity ကိုပြန်လည်နှင့်အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို relearn ရန်အဘို့အအလို့ငှာမဆိုအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ reboot အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကစတင်ရန်ကုထုံးအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည် relearning ဖြစ်စဉ်ကို
ကုထုံးတစ်ခု reboot အကြံပြုသည်။
နောက်တစ်ကြိမ်လောက်။ reboot ကအလုပ်လုပ်တယ် သူသည် ၆ ပတ်ခန့်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုးတက်မှုမြင်ခဲ့ပြီး ၈ လအကြာတွင်လိင်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ၏လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်သူ၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ သူ့ကိုရှစ်လကြာအောင်ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းက“ ဆန့်ကျင်ဘက်ကာလ” ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြောင်းပြချက်အဖြစ်ထွက်ပေါ်စေသည်။ အရူးအမူးစွဲလန်းနေသလား၊ ကျန်းမာသောလူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်စိုက်ထူရန်လအနည်းငယ်လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။